Laaybeeriyaan Iboolaa too’annaa jala oolchite - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Laaybeeriyaan Iboolaa too’annaa jala oolchite
Siiraa Le’ooniifi Giinii keessatti torbee dabre Iboolaan nama 5 ajjeesuun isaa dhibeen kuni ammas guutuu addunyaatti too'annaa jala akka hinoolle agarsiisa
Woggaa dabree keessa oduun dansaan Laaybeeriyaa irraa bayaa hinturre. Amma garuu, Laaybeeriyaan oduu gammachiisaa qabdi addunyaa guutuuf: Iboolaa to’annaa jala oolchite. Oduun kuni ummata Laaybeeriyaa qofaaf osoo hintaane guutuu hawaasa addunyaatiif sodaa Iboolaatiin dhiphataafi hafuurri itti gababbataa tureef haragalfannaa guddaadha.
Laaybeeriyaan Iboolaa guutummatti too’annaa jala oolchu isii kan labsite guyyaa 42n dabran kessatti sadarkaa biyyoolessatti namni akka haarawaatti vaayirasii Iboolaatiin faalame tokko kan hinjirre ta’uu erga mirkaneeffatteti. Dhaabbata Fayyyaa Addunyaatti (WHO) dhabamiinsa Iboolaa labsuuf biyyi takka guyyaa 42 eeguu qabdi waan jedhu akka madaalliitti kan kaaye.
Iboolaan Laaybeeriyaa keessa nannoo baatii 7f baadiyaafi magaalaa keessa burraaqaaa lubbuu namoota 4,700 oli (hojjattoota fayyaa 189 dabalatee) erga galaafatee booda kan too’annaa jala oole. Sababa Iboolaatiin ijoollee kumaatamatti laakkayamaniidha kan maatii dhaban. Diigamiinsi jireenya hawaasummaafi diinagdee ummata mudates waan akka salphatti laallamuu miti.
Ellen Johnson Sirleaf, perezidaantiin Laaybeeriyaa, Iboolaa to’annaa jala oolchuuf deeggarsa hawaasa addunyaa galateeffattee, ‘dhukkubbiifi madaan Ibolaan hawaasa irraan gaye guutummatti fayyuuf waan yeroo dheraa fudhatudha,’ jette. Ellen Johnson Sirleaf birmannaa hawaasni addunyaa gara jalqabaatti godhes osoo hinqeeqne bira hindarbine.
Oduu gaarii Laaybeeriyaa irraa dhagayame kana waa xiqqoo kan duumesseesse isa Siiraa Le’ooniifi Giiniiti. Siiraa Le’ooniifi Giinii keessatti torbee dabre keessa namoonni 5 dhibee Iboolaatiin du’uu isaaniiti. Namoonni kunniin Iboolaan du’uun isaanii kan mirkanaaye erga du’anii booda. Kana jechuun ammas Iboolaan guutummaa addunyaa irratti dhibbaan dhibbatti to’atame jechuu akka nama hindandeessisne taasise. Sodaaniifi balaan Iboolaan geessaa jiru hedduu hir’ateera, garuu.
Previous articlePr. Pool Kagaamee marraa 3ffaaf filachuuf Ruwaandaan heera fooyyessuuf deemti
Next articleIjoolleen lakkuun abbaa lama irraa dhalachuun isaanii mirkanaaye